Taariikhda My Butros » Cuntada Samayn Karaa kasta Student Xiriirka Better?
Cuntada Samayn Karaa kasta Student Xiriirka Better?
Last updated: Nov. 25 2020 | 2 min akhri
Ducada fasalka sayniska dugsiga dadweynaha dib, marka aad soo baratay ee daruuriga asaasiga ah ee nolosha.
Madaxana aannu ayaa buuxiyey aqoon oo ku saabsan sida aan sida dadkuba u baahan siin joogta ah hawada, biyo iyo cunto si ay u noolaadaan. Sure, hawada iyo biyaha waa muhiim, laakiin in badan oo aan nooceeda ah mid looga baahan yahay lagama maarmaan ah in si dhab ah u taagan soo baxay waxaa lagu cunto. Waxa laga yaabaa in aan ahay ah 18 sano jir lab oo mararka qaarkood u maleeyo of rabitaankiisa ugu muhiimsan sida cunidda, laakiin in Xukunka ardayga cunto heysta awood aad u weyn.
Cuntada naga hodan ku ah dhammaystirka weli lacag ka qarxay, cunto saaxiibo isu keentaa, cunto waa sababta loogu dabaal maalin kasta oo ka dhigi kara xiriirka arday kasta oo ka fiican.
Ha ii sharixi ...
Ma taariikhyahan caan ah laakiin quruxsan waan hubaa in tan iyo bilowgii waqti, xiriirka ayaa la aanta oo la Shafay sababtoo ah cunto.
Cavemen iyo cavewomen addoonsi badan casho moon-shiday fiican ee Dabagaale dubay iyo nuts. Viking oo ka kooban waqti tayo leh u dhexeeya kuwii ku caashaqi jiray la wadaago inta lagu jiro iidaha kulul. Maanta, xitaa dibad ka soo taariikhda kafeega ah malaha lug ku yeelan doontaa nooca qaar ka mid ah cuntada. Waxaad ka heli barta.
In Xukunka ardayga, cuntada ayaa weli heysta kusugantahay iyo sharafta darafkeeda in xiriirka.
Pizza wakiil kaa noqon kara abuuraha xiriirka ugu horeeyay oo wax raadayn ah waqtiga oo dhan. Waa dhif gabar la odhan doonaa lahayn taariikh pizza fiican (gaar ahaan haddii ay la yiraahdo a gooyeen). dhaqdhaqaajinta Simple sida ku amro in ama waayo Dooxa fiican hoose meeshii pizza ka dhigi doonaa xiriir kasta oo ay baraaraan ah.
Wax kasta oo la isku sidaas sameeyey inta badan ka sahlan ula cunto.
Haddii ay taariikhda ugu horeeyay ama taariikhda labaatanaad, haddii ay ku lug leedahay cunto in adiga iyo lammaanahaaga ku raaxaystaan ​​kadibna wada hadalka si fiican u duuli doona, dhoolo noqon doonaa dhalaal, Caloosha oo dheeraad ah oo ay ka buuxaan farxad iyo u badan tahay in aad xiriir liibaanay.
Haddii aad ku nooshahay guri leh cunto kariye shaqeeya, foornada, toaster, microwave ama kuleylka siraad ka dibna waxa kale oo aad ka qayb qaadan kartaa xoojinta xiriirka this. By cunto wada karinta, ama in kolba uu diyaariyo faafinta fiican ee muhiimka ah oo kale oo ay noqon doontaa markii xiiso iyo aad u dhow la isugu keeno (xataa haddii xirfadaha wax lagu karsado aad tahay soo socda in midkoodna ... KD weli waa cunto).
Tani Nooga keeno si ay nolol deganaansho. Waxaa jira wax qurux badan in dhammaan ardayda leedahay qorshe cuntada ka fahmi doonaa. Iyadoo laydi fudud oo caag ah, mid ka heli kartaa qadaro aad u weyn oo cunto ah, waayo waxa uu dareensan yahay sida kharashka u yar. Kaadhkaaga, cuntaan, iyo haddii ay si fudud ku lug yeelan kartaa arrin ka taataabtay. Qorsheyaasha cuntada intooda badan xitaa waxaa loo isticmaali karaa dhammaan daaafaha campus iyo qaar ka mid ah maqaayadaha magaalada hoose. Tani waxay abuurtaa in Eebe arzuqo iyada iyo sidaa darteed hab fudud u helaan sahlan in lagu bixiyo oo taga on taariikhaha.
Dunida ee tacliinta sare, nafaqo fudud ka dhigi kara xiriirka arday kasta, fiican, oo kaliya in ka badan ayaa laga cabsado. Waxay dhihi jacayl uma baahna sabab ... laakiin waxay hubisaa in cuntada u baahan yahay.
Online Dating Waxaad Helitaanka Down?
Sidee Man A ee Ayuub wuxuu muujin karaa qofku shakhsiyadiisu Romantic
Waa maxay Haweenka Dhabtii Rabtaa?